Linux Related | ejnetwork
Category Archives: Linux Related
Installing & Compiling OpenGTS Tracking System~!
Posted by edwardjude on October 6, 2015
# Project ကလုပ်ခဲ့တာ ၁နှစ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ ရှိပီဗျ။ အဲ့တုန်းက လုပ်ထားတဲ့ Documentation ကိုပဲ ပြန်တင်တာပါ။
# မဟုတ်ရင် ကြာရင် မေ့သွားမှာစိုးတာရယ်၊ တခြား reference လုပ်လိုတဲ့သူတွေအတွက် Share လိုက်ပါတယ်။
# GPS Tracking System နဲ့ပတ်သက်ရင် ဒီ OpenGTS တစ်ခုတည်းပဲ ရှိတာတော့ မဟုတ်ဖူးဗျ။ တခြား OpenSource (or) CloseSource တွေ အများအပြားရှိပါသေးတယ်။
Preparing & Setting Environment Variables
ပထမဆုံး jdk-7u72-windows-x64 ကိုသွင်းပါ(default)။ ပြီးရင် Java run၊ မ run cmd ထဲမှာ စစ်ပါ။
( make sure it says “Java™” & “Java Hotspot™ Client VM” )
mail-1.5.2.jar ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_72\_jre\_lib\_ext ထဲသို့ Copy ကူးပါ။
Apache “Ant” Folder ကို C:\_Program Files\_apache-ant အောက်သို့ ရွေ့ပါ။
Apache-Tomcat Folder ကို C:\_Program Files\_apache-tomcat အောက်သို့ရွေ့ပါ။
mysql-5.6.22-winx64 ကို Default feature အတိုင်း သွင်းပါ။
mysql-connector-java-5.1.34 ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_72\_jre\_lib\_ext ထဲသို့ Copy ကူးထည့်ပါ။
5.7 Folder ကို C:\_OpenGTS_2.5.7 အောက်သို့ ကူးထည့်ပါ။
ပြီးရင် Variables တွေ ပေါင်းသတ်မှတ်ပါမယ်။
Run box ထဲမှာ sysdm.cpl ဟုရိုက်ပါ။ Advanced Tab ကိုသွားပါ။ Environment Variables ကို နှိပ်ပါ။
System Variable ထဲမှာ New ကိုနှိပ်ပါ။ Variable name ကို JAVA_HOME ဟုပေးပါ။ (capital letters)
Variable Value မှာ C:\_Program Files\_Java\_jdk1.7.0_72 ကိုထည့်ပါ။
OK နှိပ်ပါ။ ဆက်လက်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
Variable Name ကို ANT_HOME ပေးပါ။ Variable value နေရာတွင် C:\_Program Files\_apache-ant ထည့်ပါ။
Variable Name ကို CATALINA_HOME ပေးပါ။ Value နေရာတွင် C:\_Program Files\_apache-tomcatထည့်ပါ။
Variable Name ကို GTS_HOME ဟုပေးပါ။ Value နေရာတွင် C:\_OpenGTS_2.5.7 ကိုထည့်ပေးပါ။
System Variable ထဲမှာ Path ကိုရှာပါ။ Select ပေးပြီး Edit နှိပ်ပါ။
Variable Value ၏ နောက်ဆုံးနေရာမှာ semicolon [;] ခံပြီး C:\_Program Files\_MySQL\_MySQL Server 5.6\_bin ကို ထည့်ပါ။
Semicolon[;] ထပ်ခံပြီး %JAVA_HOME%\_bin ကိုဆက်ထည့်ပါ။
Semicolon[;] ထပ်ခံပြီး %ANT_HOME%\_bin ကိုဆက်ထည့်ပါ။ [semicolon ခံစရာမလိုတော့ပါ။ OK နှိပ်ပါ။
Installing NT Service & Compiling OpenGTS Tracking System
Run box ထဲကနေ cmd ခေါ်ပါ။
mysqld ကိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ TimeStamp error ပြနေပါလိမ့်မည်။ သို့ပေမဲ့ Run ပါသည်။
Run မ Run ကို Task Manager ခေါ်ပြီး Process ထဲတွင် ကြည့်ပါ။ mysqld ဆိုပီး ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
cmd ကို ပိတ်မပစ်ဘဲ ဆက် Run ထားပါ။ နောက်တခု cmd ထပ်ခေါ်ပါ။
mysqld –install ဟုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Successfully installed Service ဆိုပီး ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
MySQL သည် default အားဖြင့် password မပါပါ။ password ချိန်းပါမယ်။
mysql –uroot –p ဟုရိုက်ပါ။
Enter Password ဟုပေါ်လျှင် ဘာမှမရိုက်ဘဲ Enter ခေါက်ပါ။
mysql > prompt ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
update mysql.user set password=password(‘password’)where user=’root’;
ဟုရိုက်ပါ။ မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်ပြထားသော password နေရာတွင် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
(root နေရာတွင် ဒီအတိုင်း ထားပါ။ မပြောင်းပါနှင့်)
Query OK ဘာညာဆိုပီး ပြနေပါလိမ့်မည်။ နောက်တကြောင်းတွင် flush privileges; ဟုရိုက်ထည့်ပါ။
Effect ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ quit ရိုက်ပီးထွက်ပါ။ အဆင့် ၇ မှ ပြန်ဝင်ပြီး Password ပြောင်းမပြောင်းစမ်းသပ်ပါ။
Apache-Tomcat အားNT Service သွင်းရန် cd %CATALINA_HOME%\_bin ဟုရိုက်ပါ။
bat install ဟုရိုက်ပါ။ (Run box ထဲမှ services.msc ခေါ်ပြီး ၀င်၊ မ၀င်ကြည့်နိုင်သည်။)
cmd ထဲမှဆက်လက်ပြီး openGTS compiling လုပ်ရန် cd %GTS_HOME% ဟုရိုက်ကာ Directory ချိန်းပါ။
OpenGTS Folder လမ်းကြောင်းသို့ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ant all ဟု ရိုက်ပါ။
Build Sucessful ဟုပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ (error ပြနေလည်း ကိစ္စမရှိပါ။)
OpenGTS Database ဆောက်ဖို့အတွက် db ကို import လုပ်ပါမယ်။
cd %GTS_HOME%\_bin အောက်သို့ပြန်ဝင်ပါ။
bat “-rootUser:root” “-rootPass:password”
(password နေရာတွင် ပြောင်းထားသော password ကို ထည့်ပေးပါ။)
db တွေ Create လုပ်သွားတာ မြင်ရပါလိမ့်မည်။
Web Interface ကို Access လုပ်ရန် system account တခု ဖွင့်ပါမယ်။
bat Account –account:sysadmin –pass:password –create
openGTS ထဲက ဖိုင်ကို Tomcat server ထဲထည့်ပါမယ်။ Build အောက်တွင် track.war ကိုရှာပါ။
cd %GTS_HOME%\_bin ဟုပြန်ရိုက်ပီး ant track.war ဟုပြန်ရိုက်ပါ။
(PDF ထဲတွင် မည်သည့် xml, conf ဖိုင်များကို ပြင်ပီးတိုင်း compile ပြန်လုပ်ပေးရမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်)
Compile ပြီးသွားလျှင် Build\_track.war ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_apache-tomcat\_webapps အောက်သို့ Copy ကူးထည့်ပါ။
Browser ခေါ်ပြီး http://localhost:8080/track/Track ကိုခေါ်ကြည့်ပါ။
Leaveacomment Posted in Database Related, Linux Related, Windows Related
Linux Fundamental (Slide)
Posted by edwardjude on October 5, 2015
This is the another presentation file from my some experience.
Hope its help to let you know some knowledge about Linux.
Leaveacomment Posted in Linux Related, Presentation_Slides
How to install ownCloud~!
Posted by edwardjude on May 21, 2013
ဘာမှပြင်စရာမလိုပါဘူး။ DB တခုဆောက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ Instructionအတိုင်းလိုက်လုပ်သွားယုံပါပဲ။
Linux မှာတော့ ပြသာနာရှိပါတယ်။ Permission ပိုင်းနည်းနည်းသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ နို့မို့ဆို
တခုပီးတခုပီး error ပေါ်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
> chown -R www-data:www-data /var/www/cloud/*
> chown www-data:www-data apps
> chmod 750 apps config
> chmod -R 770 data
> chown -R www-data:www-data data
>>>>>>> MDB2 error connect (BLAH BLAH BLAH) <<<<<<<
ဆိုပီး တက်လာခဲ့ရင် /etc/www/owncloud/lib/setup.php အောက်မှာဒါလေးသွားပြင် ပေး ရပါမယ်။
ဒီဟာလေးကိုပြင်ထည့်ပေးရပါ့မယ်။ အသုံးပြုတဲ့ DB ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Leaveacomment Posted in Linux Related, Windows Related
Posted by edwardjude on February 21, 2013
# XP မှာဆိုရင်တော့ boot.ini ဖိုင်ဆိုပီး ပါပါတယ်။ boot မတက်တော့ရင် ပြန် create လုပ်ပေးရပါတယ်။ မရေးတက်ရင်လည်းပူစရာမလိုပါဘူး။ တက်နေတဲ့စက်ကနေ copy ကူးပီး၊ ပုံမှန်တင်နေကျ Partition အပိုင်းဆိုရင် ပြင်စရာမလိုပဲနဲ့၊ တခြား Partition တွေမှာ တင်ထားခဲ့ရင် Partition နံပတ်ကိုပြောင်းပေးယုံပါပဲ။
# vista,7နဲ့ Server 2008 တို့မှာဆိုရင်တော့ boot manager editor ဆိုပီး system information ဖိုင် ini နဲ့ မလာပဲနဲ့ exe နဲ့ ပါလာပါတယ်။ configuration အပိုင်းကလဲ ရှုပ်ပါတယ်။
# ဖြစ်တဲ့ပြသာနာက windows7တင်ပီးတော့မှ Server 2008 ကို Dual တင် လိုက် တာပါ။ Server 2008 လဲတင်ပီးရော၊ windows7ပါမလာတော့ပဲနဲ့ Server 2008 ပဲ တက်ပါတော့တယ် 😀
# Gooogling လုပ်ကြည့်တော့ visual bcdeditor ဆိုပီးသွားတွေ့ပါတယ်။ သုံးရတာလဲ လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Automatic Repair နဲ့ပဲ ကိုင်လိုက်ပါတယ်။
# ပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ OS Choice Menu နဲ့ ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အိုကေသွားပီပေါ့ 🙂
Posted by edwardjude on January 29, 2013
ခုရက်ပိုင်းပျောက်နေပြန်ပါပြီ။ မအားလပ်တာကတကြောင်း၊ 4Mbps Fiber Optics ကိုယ်တိုင်ကိုက SEA GAME အကြောင်းပြသဖြင့်လား၊ ဘာလားမသိပါ။ တခါ တခါ လုံးဝကို Request Time Out ကျသွားပါတယ်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့ရက်က များပါတယ်။ IT Director က ကျွန်တော့်ကို MySQL Database Server ကို Sync လုပ်ရန် တာဝန်ပေးပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အဲဒီအပိုင်းကိုပဲ တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဆိုတာက အမှန်က Database Server က Microsoft SQL Server ကိုသုံးထားပါတယ်။ အဲဒီ Database ကို opensource တခုဖြစ်တဲ့ MySQL ထဲကို ပြောင်းထဲ့ပါမယ်။ အဲဒီ MySQL Server ကိုမှ ကျွန်တော်က ရုံးက MySQL Server ထဲကို လှမ်းပြီးတော့ (Sync) Replicate လုပ်ပေးရမှာဗျ။ ကဲ.. စကြရအောင်။ အခြေခံတော့ရှိရမှာပေါ့ဗျာ။ ထပ်ပြောမနေတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်က ရောသမမွှေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပါပဲ။ GUI ကော၊ CUI ကော ချမယ်နော်။ Ready !!!
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင် Server Site (Remote Site) နဲ့ Client Site ဆိုပီးခွဲပြောပါမယ်။ Server Site က Master Server ဖြစ်ပြီးတော့၊ Client Site ကတော့ Slave Server ပေါ့။ Master Server က DB တစ်ခုလုံးကို Slave Server က လှမ်းပြီး Sync လုပ်မယ်။ ဘယ် platform ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ Linux ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ သုံးတတ်ရင်လွယ်ပါတယ် :P(မသုံးတတ်ရင် မလွယ် ဘူးပေါ့)။ ကျွန်တော်လုပ်တုန်းကတော့ Master Server က Windows7ပါ။ Slave Server ကတော့ Ubuntu Server ပါ။ အဲ့တော့ကာ ပြောရင်ရှုပ်နေမှာဆိုးလို့ Windows to Windows ဟာပဲ ပြောပြပါမယ်။
# ပထမဆုံး XAMPP ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။
# ပြီးတော့ phpmyadmin လည်းသုံးပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် MySQL Setting ကို နည်းနည်းပြင်ဖို့လိုပါမယ်။ XAMPP ရဲ့ default MySQL Password က blank ပါ။ အဲတော့ Security ရှိသွားအောင် Password ထည့်မယ်၊ပြောင်းပါမယ်။ ပြီးရင်အဲ့ပြောင်းထားတဲ့ Password ကို xampp\_phpmyadmin\_config.inc.php ထဲမှာ သွားပေးရပါမယ်။ နည်းနည်းတောင် အသေးစိတ်နေပါပီ။ တိုတိုပြောရရင် phpmyadmin သုံးလို့ရအောင် အရင်လုပ်ပါမယ်။ MySQL Server ကို stop အရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်။
# အခုပြောနေတာ Master Server ဘက်ခြမ်းရော၊ Slave Server ဘက်ခြမ်းအထိပါ လုပ်ပေးရမှာပါ။ ကဲ… ပြီးရင် Master Server ဘက်ခြမ်းရဲ့ MySQL ကို Master ဖြစ်အောင် လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် config ချပါမယ်။ အသေးစိတ်သိချင် ရင်တော့ official site မှာသွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
# XAMPP ရဲ့ MySQL Config ဆိုတာလေးကို ကလစ်တချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ my.ini ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ notepad နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်။
# အဲဒီမှာ [mysqld] section မှာ နှစ်ကြောင်းသွားရေးပါမယ်။ log-bin=mysql-bin နဲ့ server-id=1 ဆိုပီးသွားရေးပေးရပါမယ်။ နမူနာအောက်မှာပြထားပါတယ်။
basedir = “C:/xampp/mysql”
tmpdir = “C:/xampp/tmp”
datadir = “C:/xampp/mysql/data”
# ပြီးရင် save လိုက်ပါ။ log-bin=mysql-bin ဆိုတာက Master ဖြစ်ဖို့အတွက် binlogging က enable ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါမှ Slave က Sync လှမ်းလုပ်တဲ့အခါကျရင် တိုက်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်အောင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်က server-id=1 ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Computer မှာသုံးတဲ့ Internet Protocol (IP) နဲ့တူပါတယ်။ တစ်စက်နဲ့ တစ်စက် လှမ်းချိတ်ဖို့ IP လိုသလိုမျိုးပေါ့။ သူကတော့ server-id နဲ့သွားပါတယ်။ my.ini မှာ လုပ်ဖို့လိုတာဒါအကုန်ပါပဲ။
# သာမန်ဆိုရင်ပြောတာပါ။ တခြား အသုံးပြုလို့ရတဲ့ inno_db_flush ဆိုပီး အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ MySQL Server ကို start ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ မှားပြီး config ချမိရင် status မှာ နီနီစာသားတွေ ပေါ်လာပီး debug error ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။
# Master ထဲက database တွေကို အရင်ဆုံး dump လုပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် slave ထဲထည့်ဖို့ပေါ့။ dump လုပ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကတော့ ခုနက Master ရဲ့ bin-log တွေနဲ့ tables postion စတာတွေကို slave မှာ connect မလုပ်ခင် တူနေဖို့အတွက်ပါပဲ။ MySQL ထဲကို ၀င်ပါမယ်။
# > myql -uroot -p
# database ကို လက်ရှိရှိနေတဲ့ tables position နဲ့ bin log မှာ ရပ်နေစေဖို့အတွက် lock ချပါမယ်။
# mysql > flush tables with read lock;
# mysql > show master status; ဆိုပီးလုပ်လိုက်ရင် master-log-file နဲ့ master-log-pos ရဲ့ data တွေကိုလာပြပါလိမ့်မယ်။ အဲတာတွေကို စာရွက်မှာ မှတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို အိုကေပါပီ။ပြီးရင်….
# quit နဲ့ထွက်လိုက်ပါ။ စတင်ပြီး dump လုပ်ပါမယ်။
> mysqldump -uroot -p –all-databases –master-data > fulldb.db
ဆိုပီး shell ထဲမှာ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒါဆို shell ရဲ့ path လမ်းကြောင်းထဲမှာ ခုနက dump ဒေတာ ရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် lock ပြန်ဖြည်ပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ slave server ဘက်ခြမ်းမှာ db ကို execute လုပ်ပြီးမှ unlock tables; လုပ်ပါတယ်။ error တက်ဖူးထားလို့ပါ 😛
# ဒါဆိုရင်တော့ Master ဘက်အခြမ်းကပြီးသင့်သလောက်ပြီးပါပြီ။ ကိုယ့်ကို လာချိတ်ထားတဲ့ slave host ကို ကြည့်တာလောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
# Slave ဘက်အခြမ်းကို သွားကျအုံးစို့။ ခုနက Master အတိုင်း my.ini မှာ နှစ်ခုပဲ သွားပြင်ပါမယ်။ ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ server-id ပါ။ မတူတာပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ server-id=2 လို့ပေးပါတယ်။ပြီးရင် report-host ထည့်ပါမယ်။ အဲဒီလိုထည့်ပါမှ phpmyadmin မှာတက်ကြည့်ရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ report-host=sql-slave ပေါ့။ (sql-slave) ဆိုတာ local မှာဆိုရင်တော့ computer name ပေါ့၊ Internet မှာဆိုရင်တော့ Host Name ပေါ့ဂျာ။ (မောလိုက်တာ… :P)
# ကဲ.. ပြီးရင် ခုနက Master Server က dump ကို Slave Server ထဲ Execute လုပ်ပါမယ်။
> mysql -uroot -p < fulldb.db
ဒါဆိုရင် Master Server ထဲက db တွေ အကုန်ရောက်ကုန်ပါပီ။ Master Server ကိုချိတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ MySQL Entry တွေရိုက်ထည့်ရပါဦးမယ်။ Master Server မှာပေးထားတဲ့ password ပါဖြစ်သွားပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့အတွက် MySQL Service ကို restart လုပ်ပေးသင့်ရင် လုပ်ပေးပါ။
# mysql> change master to
> master_log_file = ‘mysql-bin.0004’ ,
> master_log_pos = 199;
ဆိုပီး ခုနက Master Server မှာ Show Master Status လုပ်တုန်းက ပေါ်လာတဲ့ entry တွေကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်ခုထည့်ထားတဲ့ဟာက အစမ်းပါ။ ကိုယ့်ဖာသာပေါ်လာတဲ့ဟာကို ပြောင်းထည့်ပေးရပါမယ်။
# ပြီးရင် Master Server ကိုသွားလိုက်ပါ။ phpmyadmin သုံးပါမယ်။
# ၀င်ဝင်ချင်းမှာပဲ Replication ဆိုတဲ့ Tab ကိုရှာလိုက်ပါ။ မတွေ့ဘူးဆိုရင်more နဲ့ ဆက်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် နှိပ်ပါ။
# Master Replication ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Replication User တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ။ အဲဒီအကောင့်နဲ့ Slave Server မှာ phpmyadmin ဆက်သုံးပါမယ်။
# Slave Server မှာလဲ ခုနအတိုင်းလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ချိတ်ရမဲ့ host, username, password တို့လာတောင်းပါလိမ့်မယ်။ host ကတော့ Master Server ရဲ့ name ပေါ့။ username ကတော့ ခုနက Master မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ Replication အကောင့်ပါ။ ပြီးရင် GO လိုက်ပါ။
# shell ထဲက၊ MySQL prompt ထဲကနေ …
# mysql > start slave; ဆိုပီး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စတင် အလုပ်လုပ်ပါပြီ။
# phpmyadmin မသုံးချင်ဘဲ CUI သမားများကတော့ ခုနက change master to ဆိုတဲ့နေရာမှာ master-host, master-user, master-password ဆိုပီးထည့်နိုင်ပါတယ်။
# report-host ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် phpmyadmin မှာ slave host ဆို ပီးပြနေပါလိမ့်မယ်။
# Slave Server ကနေ Master Server ဆီ အလုပ်၊လုပ်မလုပ် လှမ်းကြည့် လို့ရပါတယ်။
# mysql > show slave status\_G; ဆိုပီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
master-host ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Waiting for sync from master server လို့ပေါ်နေရင် အိုကေနေပါပြီ။
# Master Server ကနေလဲ ကိုယ့်ဆီ Connected ဖြစ်နေတဲ့ Slave ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။
# mysql > show slave hosts;
ဒါဆိုရင်တော့ Master Server ဆီက ဘယ် Database ပဲ create လုပ်လုပ်၊ drop လုပ်လုပ် အမြဲတမ်း Sync ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Slave Server ဆီမှာ effective ဖြစ်နေမှာပါ။ 🙂